फेसबुक विज्ञापनमा विज्ञापन गर्नुहोस् फेसबुकमा सब भन्दा राम्रो विज्ञापन गाइड! | पछिल्लो मेलिiling डाटाबेस
फेसबुक विज्ञापनमा विज्ञापन गर्नुहोस् फेसबुकमा सब भन्दा राम्रो विज्ञापन गाइड!
घर » ईमेल डाटाबेस ब्लगहरू » डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा » फेसबुक विज्ञापनमा विज्ञापन गर्नुहोस् फेसबुकमा सब भन्दा राम्रो विज्ञापन गाइड!
14 Feb, 2019 in डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा ट्याग फेसबुक विज्ञापनमा विज्ञापन गर्नुहोस् फेसबुकमा सब भन्दा राम्रो विज्ञापन गाइड! by जकारिया हुसेन
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कसरी उत्तम फेसबुक तरीकाले फेसबुक विज्ञापनमा विज्ञापन गर्ने? youtube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस् यहाँ हामी तपाइँको बारे मा एक लेख ल्याउँछौं फेसबुक विज्ञापन यस वर्षको लागि तपाईंको अनलाइन मार्केटि strategy रणनीतिको अनुहारमा मद्दत गर्दछ।
हामी कसरी तपाइँ फेसबुक (वर्तमान विज्ञापन को राजा) तपाइँको डिजिटल मार्केटिंग रणनीति मा एक ठूलो सहयोगी हुन सक्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछौं। अवश्य पनि, हामी तपाईंलाई केही लक्ष्यहरू दिनेछौं कसरी तपाईं आफैंका लागि निर्धारित लक्ष्यहरूको सम्बन्धमा तिनीहरूलाई अनुकूलित गर्ने। र सुरु गर्नको लागि हामीले सर्वप्रथम यो थाहा हुनुपर्दछ कि यो के हो, यो कसरी प्रयोग भएको छ र यसको फाइदाहरू।
»तपाईलाई पनि रूचि हुन सक्छ: फेसबुक विज्ञापन बनाम गुगल विज्ञापनहरू: प्रत्येक विज्ञापन प्लेटफर्मको फाइदा
किन आफूलाई फेसबुक विज्ञापनहरूमा पदोन्नति गर्ने?
फेसबुक फिगरको बारेमा कुरा गर्नु सफलताको बारेमा कुरा गर्दैछ। 2016 को अन्त्यमा यो अनुमान गरिएको थियो कि यससँग 1,230 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ताहरू छन्। हाल यो संख्या पहिले नै 2,000 मिलियन पुग्नेछ।
यी संख्याहरूको आधारमा, हामी देख्छौं कि फेसबुक विज्ञापनहरू प्रायः सबै व्यवसायहरूको लागि अर्थपूर्ण बनाउँदछ, किनकि यो एक ठूलो संख्यामा सम्भावित ग्राहकहरूको पहुँच गर्न द्रुत, प्रभावकारी र आर्थिक उपकरण हो। थप रूपमा, विज्ञापन अधिकतम अनुकूलित गर्न सकिन्छ प्लेटफर्मका प्रयोगकर्ताहरूको सूचना रहेकोमा धन्यवाद। तपाईं धेरै विशिष्ट लक्ष्यीकरण अभियानहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। सारांशमा: यसको दायरा र निजीकरण सम्भावना धेरै उच्च छ, त्यसैले यसले एक उत्कृष्ट अवसर प्रतिनिधित्व गर्दछ!
फेसबुक भित्र विज्ञापन
तपाईंले जान्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको त्यो हो तपाइँको विज्ञापन चार अलग प्लेटफार्ममा राख्न सकिन्छ :
फेसबुक भित्र नै
र दर्शक नेटवर्कमा
यद्यपि यस समयमा हामी ध्यान दिनेछौं फेसबुक भित्र विज्ञापन । यहाँ तपाईंको विज्ञापनहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई विभिन्न स्थानहरूमा प्रभाव पार्दछ, जस्तै तपाईंको साथीहरूको पोष्टहरूको छेउमा फिडको सेक्सन, दायाँ स्तम्भ, तत्काल लेख, इन्स्ट्रिम भिडियो र सुझाव गरिएका भिडियोहरू, र ती दुबै कम्प्युटर र मोबाइलमा देखाइनेछ। उपकरणहरू।
फेसबुक विज्ञापनमा लक्षित विज्ञापन
फेसबुकमा यस प्रकारको विज्ञापन सुरू गर्दा दिमागमा राख्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष तपाईंको हो विज्ञापन उद्देश्यहरु । यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि लक्ष्यको आधारमा वा तपाईंलाई आवश्यक अनुसार, फेसबुकले विज्ञापनको प्रकारको सुझाव दिनेछ जुन राम्रोसँग काम गर्न सक्दछ। र उसले कसरी गर्छ? सरल, तपाईंको उपकरणको माध्यमबाट नयाँ विज्ञापन सिर्जना गर्ने समयमा, फेसबुकले तपाईंलाई अभियानको लागि लक्ष्य छनौट गर्न सोध्नेछ।
फेसबुकले3प्रस्ताव गर्दछ उद्देश्यका प्रकारहरू :
प्रत्येक लक्ष्य भित्र फेसबुकले अधिक विकल्पमा तपाइँको विज्ञापन अनुकूलन गर्न केहि विकल्पहरू प्रदान गर्दछ।
1 # मान्यता
भित्र मान्यता , निम्न विकल्पहरू चयन गर्न सकिन्छ:
प्रकाशनको साथ अन्तर्क्रिया : यो तब हुनेछ जब तपाईं कम्पनी पृष्ठको प्रकाशनहरू प्रचार गर्न र मानिसहरूलाई तपाईंको प्रकाशनसँग अन्तर्क्रिया गर्न प्रोत्साहित गर्न चाहानुहुन्छ।
मलाई यो पृष्ठ मनपर्‍यो: अनुयायीहरूको संख्या बढाउन।
स्थानीय प्रसार : तपाईंको कम्पनीको घोषणा गर्न यो नजिकका मानिसहरूलाई।
ब्रान्डको बदनाम : सम्भवतः यसमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूको ठूलो संख्यामा पुग्नको लागि।
स्कोप : सकेसम्म धेरै प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्न।
2 # प्रतिष्ठा
यदि तपाइँको लागी लक्ष्य राख्नु भयो भने प्रतिष्ठा, त्यहाँ निम्न सम्भावनाहरू छन्:
वेबसाइटमा क्लिकहरू : जब तपाईं वेबसाईटमा ट्राफिक ल्याउन चाहानुहुन्छ।
अनुप्रयोग डाउनलोडहरू : तपाईंको अनुप्रयोगको अधिक डाउनलोडहरू प्राप्त गर्न।
घटनाहरूको प्रतिक्रिया : हामी यसलाई अधिक व्यक्तिहरूलाई तपाईंको कार्यक्रममा भाग लिनको लागि प्रोत्साहित गर्न प्रयोग गर्दछौं।
भिडियो पुन: निर्माण: ताकि धेरै भन्दा धेरै व्यक्ति तपाईंको अडियोभिजुअल सामग्री हेर्न।
सम्भावित ग्राहकहरुको उत्पादन : जब तपाईं आफ्नो व्यवसाय मा रुचि व्यक्ति देखि डाटा क्याप्चर गर्न चाहानुहुन्छ।
3 # रूपान्तरण
र अन्तमा, जब तपाइँको लक्ष्य छ रूपान्तरण अभियानका निम्न प्रकारहरू छन्:
वेबसाइटमा रूपान्तरण : जब तपाईं आफ्नो अनलाइन बिक्रीमा योगदान दिन खोज्दै हुनुहुन्छ।
अनुप्रयोगसँग अन्तर्क्रिया : प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाइँको अनुप्रयोगसँग अन्तर्क्रिया लिनको लागि।
प्रस्तावहरूको लागि अनुरोध : जब तपाइँ तपाइँको प्रस्तावहरु लाई बढावा दिन चाहानुहुन्छ।
को बिक्री उत्पादन सूची : लक्षित श्रोताको आधारमा स्वचालित रूपमा तपाईंको सूचीबाट उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्न।
व्यापार मा भ्रमण : बढि व्यक्ति तपाईको स्टोरको ढोका भित्र पस्न।
फेसबुक विज्ञापनहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएका ढाँचाहरू
ब्रह्माण्डको रहस्य पत्ता लगाउनको लागि खातामा लिन अर्को कारक त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन् विज्ञापन ढाँचा :
संग विज्ञापन फोटो
प्रस्तुति : धेरै भिडियोहरू वा छविहरू जुन स्वचालित रूपमा प्रयोगकर्ताको लागि प्रस्तुत गरिन्छ र जुन एक विशिष्ट यूआरएलमा नेतृत्व गर्दछ।
अनुक्रम : जब धेरै उत्पादनहरू एकल विज्ञापनमा देखाईन्छ र प्रयोगकर्ताले अर्को उत्पादन हेर्न क्लिक गर्दछ। प्रत्येक छवि एक फरक उत्पाद URL मा निर्देशित गर्दछ।
क्यानभास : एक उच्च लोड गति को साथ एक निजीकृत मोबाइल विज्ञापन अनुभव हो।
संग्रह विज्ञापन: जब एक उत्पाद सूची प्रस्तुत छ र छवि वा भिडियो मा प्रति उत्पाद पूर्वावलोकन को एक समूह बनाउँछ।
अब यो प्रयोग गर्ने कुरा हो! सबै भन्दा पहिले, यो याद गर्नुहोस् कि तपाइँ के हासिल गर्न चाहानुहुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट हुनुपर्दछ र आफ्नो उद्देश्य अनुसार ढाँचा संयोजनको साथ परीक्षणको माध्यमबाट जानुहुन्छ। तपाई रचनात्मक हुनुपर्दछ, परीक्षण बनाउनुहोस् र नतिजाको साथ धेरै विश्लेषणात्मक हुनुपर्दछ कि कस्तो प्रकारको विज्ञापन राम्रो छ भनेर पत्ता लगाउन। फेसबुकसँग सबै कुरा गणना गरिएको छ र यी सबै विकल्पहरूको साथ यसले प्रस्ताव गर्दछ, तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तपाईंको अभियानहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न यो धेरै नै सजिलो हुन्छ।
← डिजिटल मार्केटिंग: तपाईंको ब्रान्डको लागि समावेशी भाषा
इनबाउन्ड मार्केटिंगका लागि डाटा एनालिटिक्स: कुन मेट्रिक्स हेर्नु र किन →